အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Htet Myo Myint - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Htet Myo Myint
မင်္ဂလာပါ Htet Myo Myint။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
ဝီကီဘယ်လိုစသုံးရမယ်ဆိုတာကိုတော့ တည်းဖြတ်နည်းစာမျက်နှာမှာကြည့်ပါ။ တည်းဖြတ်ခြင်းအကြောင်း နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၀၉၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Thank you all. I still have difficulties with editing pages. Bro Ninja✮Strikers , thank you for editing.
Hi Htet Myo Myint,
RMaung (WMF) ၁၄:၁၆၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
RMaung (WMF) ၁၅:၀၀၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Htet_Myo_Myint&oldid=482928" မှ ရယူရန်